Eiffel Tower oo ah taalada dheer ee ku taala magaalada Paris ee dalka faransiiska ayaa gebi ahaanba shaqadeedii hakad la geliyey ka dib markii nin oo dusha sare uga baxay.
Taaladan oo ah goob loo dalxiis tago dhirirkeeduna yahay 1000 Dhudhun (1000 Ft), ayaa mar qura lagu baraarugay, nin dhakada kore ka saaran, welina kor u sii taxaabaya, waxaana loogu yeeray booliska oo iminka la xaajoonaya ninkii.
Dhowr sawir oo lagu wadaagay baraha bulshada ayaa lagu arkaayey ninka oo sii fuulaya siina dhaafaya ilaa iyo 300 oo mitir, markaana wixii dad ahaa oo xilligaas dalxiisayey goobta ayaa laga wada saaray.
Eiffel Tower oo ah goob aad loo ilaaliyo, dhowr dhismo oo ay maqaayadu laga cunteeyo iyo baarar cabitaan ka mid yihiina ku dhex yaalaan, ayaa hadda ka horna dhowr qof sidaan oo kale, dusha uga baxeen, qaarna iska soo tuureenoo naftaba is dhaafiyeen.
Previous Inna subag baa dilay, inta kalena saxariir
Next Qaar ka dhacay Lyon, Faransiiska